मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन‘के गर्ने होला ? – News543Online
February 20, 2021 adminLeaveaComment on मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन‘के गर्ने होला ?
कती खेर आएको फुच्ची भन्नु भो, मलाई त्यो दाई ले सधै फुच्ची भनेर बोलाउनु हुन्छ । मैले आघिनै भने, आनी दाई नुहाउन लाई बहिर कल मा जानुभो । भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस👇
जसको सम्झनामा प्रमोद खरेल काठमाण्डौंमा गीत रेकर्ड गराउँदैथिए, उनै ‘आमा’को झापामा भयो यसरी निधन, स्त’ब्ध भएका प्रमोदले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस।
कृपया अन्तिम पटक फोटोमा छोएर रिप लेख्नु होला rip rip 😭😭